विश्व स्मार्टफोन बजारका टप टेन कम्पनी
नेपालगन्ज: स्ट्राटेजिक एनालिटिक्स तथा काउन्टरप्वाइन्टको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१९ को दोस्रो त्रैमासिकमा पनि विश्व बजारमा स्मार्टफोनको बिक्रीमा गिरावटले निरन्तरता पाएको छ ।
विश्व स्मार्टफोन बजारको गिरावटका बाबजुत सामसुङ र हुवावेले भने स्मार्टफोनको बिक्री तथा बजार हिस्साको मामिलामा वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
स्ट्राटेजिक एनालिटिक्सका अनुसार विश्व स्मार्टफोन बजारमा यस त्रैमासिकमा स्मार्टफोनको बिक्रीमा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको छ जबकि सामसुङका स्मार्टफोनको बिक्रीमा भने १.९ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । अर्को कम्पनी हुवावेका स्मार्टफोनको बिक्रीमा चाहिँ १ दशमलब ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ ।
एप्पल कम्पनीले भने यो त्रैमासिकमा गिरावटको सामना गर्नुपरेको छ । सन् २०१९ को दोस्रो त्रैमासिकमा एप्पलका स्मार्टफोनको बिक्रीमा शून्य दशमलव ७ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ ।
संख्याका हिसाबले उक्त तीन महिनामा सामसुङले ७ करोड ६३ लाख गोटा स्मार्टफोन बेच्न सफल भएको छ । त्यस्तै दोस्रो स्थानको हुवावेका ५ करोड ८७ लाख थान स्मार्टफोन बिक्री भएका छन् भने तेस्रो स्थानमा रहेको एप्पलका ३ करोड ८० लाख थान मात्र आइफोन बिकेका छन् ।
बिक्री तथा मार्केट शेयरको दृष्टिले ९.४ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको शाओमी चौथो स्थानमा र ८.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको ओप्पो पाँचौं नम्बरमा रहेको छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यी दुवै कम्पनीको वृद्धिदरमा सामान्य मात्रै बढोत्तरी देखिएको छ ।
काउन्टर प्वाइन्टको रिपोर्ट अनुसार विश्व स्मार्टफोन बजारमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा रहेको सामसुङको बजार हिस्सा २१ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ । दोश्रो स्थानमा रहेको हुवावेको बजार हिस्स १५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ भने तेस्रो स्थानको एप्पलको १० दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै चौथो स्थानमा शाओमी छ, जसको बजार हिस्सा ९ प्रतिशत रहेको छ । ओप्पोको ८.१ प्रतिशत, भिभोको ७.५ प्रतिशत, लेनोभोको २.६ प्रतिशत, एलजीको २.२ प्रतिशत तथा नोकियाको स्वामित्व रहेको एचएमडीको बजार हिस्सा १.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै रियलमीको बजार हिस्सा १.३ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य विभिन्न ब्राण्डका स्मार्टफोनहरुले बाँकी २०.८ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, श्रावण २१, २०७६, ०२:०८:००
नेपाली स्याट–१ ले लियो तीन मुलुकको तस्बिर
साईबार क्राइमबारे सचेतना कार्यक्रम
नेपाल टेलिकमको रारामा फोरजी सेवा
यस्तो छ सुबिसुको दशैं अफर
सुबिसु केबलनेट (प्रा.) लिले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैंलाई मध्यनजर गर्दै मात्र रु. ९९ मा इन्टरनेट वा क्लियर टिभि सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
क्यानको अध्यक्षमा शर्मा
आइतवार, भदौ ८, २०७६ सेतोखरी
कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ बाँकेको अध्यक्षमा रमणी प्रसाद शर्मा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न भएको ११ औं साधारणसभाले शर्मालाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । पुरा पढ्नुहोस्